Ithuthuke kakhulu i-Isuzu D-Max entsha
Fanelesibonge Bengu | April 15, 2022
IMOTO: ISUZU D-MAX
CISHE enye yezimoto ezibhekwe kakhulu eNingizimu Afrika yi-Isuzu D-Max osekunesikhathi kubikezelwa ukuthi isendleleni.
ID-Max yakhiwa efemini yakwa-Isuzu eseGqeberha ngemuva kokuthi le nkampani itshale enhle imali ukuyithuthukisa.
Abantu bakuleli bayazifela ngamaveni lapho iD-Max ibanga khona namanye okubalwa kuwo iToyota Hilux, Ford Ranger, Nissan Navara namanye.
ID-Max entsha ngeyesizukulwane sesikhombisa futhi kungakuthusi nokubona endala “iyintsha” ngoba isazoqhubeka nokudayisa kodwa isibizwa ngeGen 6.
Entsha ihlukene ngezinhlobo ezingu-24: amaSingle Cab ayisithupha, ama-Extended Cab ayisithupha namaDouble Cab angu-12.
Akuthusi ukubona beqinisa kumaDouble Cab ngoba yiwo ayintandokazi kubathengi balolu hlobo lwezimoto.
Igabade ilishiye ngo-212mm kuya ku-232mm kuya nangamasondo njengoba eqala ku-16 inch kuya ku-18 inch.
Kunezinhlobo ezimbili zezinjini zikadizili. Eyokuqala yi-1.9 litre oyifica kwiSingle Cab. Inamandla angu-110kW netorque engu-350Nm. Uphinde uyithole kwi-Extended Cab neDouble Cab uma uthanda.
Kuphinde kube khona nethuthukisiwe engu-3.0 litre enamandla anyuke ngo-10kW aba ngu-140kW netorque engu-450Nm. Kuzona zombili ukhetha kugearbox oyi-6 speed oshintshwayo noma ozishintshayo.
Isinkulu kunendala kodwa yaba mfishane kancane futhi inemibala egqamile ehehayo.
Ishesi nosuspension kuthuthukisiwe ukumelana nesisindo futhi kwiLSE Double Cab eyi-4x4 engiyishayelile ithuthuke kakhulu ngokuba ntofontofo kanjalo nomsindo wokuduma kwenjini mncane ngaphakathi. Injini nogearbox kusebenza kahle ngoba ishintsha ngesikhathi esifanele.
Amandla ezinawo enza zikwazi ukudonsa isisindo esifinyelela ku-3 500kg futhi okumnandi ukuthi ama-4x4 asefika nediff lock ngemuva.
Kuya ngenhlobo yakho kodwa kwiSingle Cab kunomsakazo ofaka i-USB neCD, Bluetooth, amabhreki e-ABS, EBD, Brake Assist, Hill Start Assist nokunye.
Kwi-Extended Cab kunomsakazo onjengakwiSingle Cab kodwa kwezinye izinhlobo kukhona i-infotainment system okwazi ukuxhuma iselula nge-Apple CarPlay/Android Auto ngaphandle kwentambo, cruise control, ikhamera eveza ingemuva, amalambu eLED nokunye.
KumaDouble Cab ufica i-infotainment system, iWi-Fi, imbobo ye-USB ngemuva, ikhamera eveza ingemuva, amalambu eLED nokunye.
Kuya ngenhlobo yakho kodwa ezokuphepha zihlanganisa ukuthi isho uma kunemoto eseceleni, amasensor ngemuva nangaphambili, adaptive cruise control, iyasho uma izoshayisa ngaphambili futhi ibhreke uma kunesidingo, iyakusiza ukuhlala emzileni, iyabhreka ngemuva kwengozi ukugwema enye, nokunye okuningi.
AmaSingle Cab - abiza phakathi kuka-R401 700 kuya ku-R528 800
Extended Cab - abiza phakathi kuka-R433 600 kuya ku-R670 300
Double Cab - abiza phakathi kuka-R498 900 kuya ku-R814 700
Zonke zifika neservice plan yeminyaka emihlanu noma u-90 000km, iwarranty yeminyaka emihlanu noma u-120 000km neroadside assistance kanjalo ne anti-corrosion warranty yeminyaka emihlanu.